Emily and the Magical Journey (2021) – MM Subtitles
Video Sources 13892 Views Report Error
Travel toaworld where anything is possibleMar. 18, 2021Sweden85 Min.
ဒီကားလေးကတော့ မှော်ဆန်ဆန်ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းလေးက ကလေးမလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးအခြေခံ ရိုက်ကူးထားတာပါ။ အဲကလေးမလေးနာမည်ကတော့ အမ်မလီပေါ့။ အမ်မလီရဲ့ အဖေဟာ သူငယ်ငယ်ကလေး တည်းက ဆုံးပါသွားတာပါ။ သူအဖေက ပန်ချီဆွဲ ပြီး သူအမေကတော့ သူ့အဖေရဲ့ ပန်ချီတွေကို အခြေခံပြီး ဇာတ်လမ်းရေးတာပါ။ သူအမေက သူရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေထားတဲ့နေရာကို အမ်မလီကိုဝင်ခွင့်မပြုထားပါဘူး။
တစ်နေ့တော့ အမ်မလီက သူအမေမရှိတုန်းဝင်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်မိသွားပါတော့တယ်။ နောက်တော့ အဲစာအုပ်ထဲကနေရာကို အမ်မလီတစ်ယာက် ယောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။ အမ်မလီရောက်တဲ့ ဖန်တဲလန့် က ငလျင်တစ်ခုကြောင့်ရဲတိုက်ကြီးပျက်စီးပြီး စုန်းမတစ်ကောင်က အုပ်စိုးနေပါတော့တယ်။ ပုံမှန်အနေအထားဖြစ်ဖို့ဆို သလင်းကျောက်လေးကို ရဲတိုက်ထဲ ပြန်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။ အဲကလူသားတွေကတော့ မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ကြောက်ကြလို့ပါ။ အကြောက်တရား က မကောင်းဆိုးဝါးကိုနိုးထိလာစေပါတယ်။ ဒီတော့ ဖန်တဲလန့်ကလူတွေက ကလေးငယ်လေးဖြစ်တဲ့ အမ်မလီကို အားထားလာပါတော့။ အမ်မလီလည်း သူမသိတဲ့နေရာမှာ မသိတဲ့သူတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရတာပေါ့။
ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမလဲ ၊ ဘာကြောင့်သူကိုအားထားကြလဲဆိုတာ ရှုစားလိုက်ကြပါဦး။ ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်လို့ မကောင်းမှာတော့ မပူရပါဘူး။
Duration……..: 1h 25min
Original title Faunutland and the Lost Magic
Download 🔥 1080p 5.1CH ⚡Fast Drive 1.24 GB
Download 720p ⚡Fast Drive 546 MB
Download 480p ⚡Fast Drive 312 MB
Download 🔥 1080p 5.1CH G Drive 1.24 GB
Download 720p G Drive 546 MB
Download 480p G Drive 312 MB
Download 🔥 1080p 5.1CH Solid Drive 1.24 GB
Download 720p Solid Drive 546 MB
Download 480p Solid Drive 312 MB